Qaban qaabada Xuska Maalinta ciidanka xoogga Soomaaliya oo Soomaaliya ka socota. |
Qaban qaabada Xuska Maalinta ciidanka xoogga Soomaaliya oo Soomaaliya ka socota.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa gobollada dalka ka wada u diyaar-garowga xuska sanad-guuradii 53-aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay oo ku beegan berri oo ay bishu tahay 12-ka April, iyada oo qaban qabaada xoogeeda laga dareemayo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya.
Saraakiisha ciidanka oo ka hadlay munaasabadaan iyo weynankeda ayaa waxa ay dhamaan isku raaceen in sanadkaan uu yahay kii ugu wacnaa wayihii tegay maadaamda inta badan gobalada dalka Shabaab lagala wareegay.
Munaasabada Muqdisho lagu qaban doono Berri ayaa lafilayaa in uu ka qeyb qaato madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad halkaasi ka jeedin doona isaga oo marka uu xafladaasi ka qeyb qaatana lafilayo in uu u kicitimo dalka Turkiga oo uu uga qeyb gelaayo wadahadalada Soomaaliaya iyo maamulka Somaliland.
Jeneraal Yuusuf Cismaan Xuseen (Dhuumaal) oo ahaa madaxii howlgelinta ciidanka dowladda ee ku sugnaa gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka siddeetan iyo shan boqolkiiba gacanta ku hayaan gobollada dalka, inta hartayna ay dhowaan kala wareegi doonaan maleeshiyada Al-Shabaab.
Jeneraal Dhuumaal ayaa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo uu tilmaamay inuu sanadkan nasiib u yeeshay inuu xuska aasaaskiisa ku damaashaado guulo uu ka gaaray howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee lagu xoreeyay gobollo badan.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee gobolka Hiiraan Col. Tawane Axmed ayaa isna sheegay inuu meel gabogabo ah marayo diyaar-garowga ay ugu jiraan xuska maalinta ciidanka xoogga dalka, wuxuuna shacabka gobolka ku casuumay inay kala soo qeyb galaan xafladda maalinta berri ah ka dhaceysa B/weyne.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, wuxuuna u heellan yahay inuu si buuxda ula wareego ammaanka iyo xasilloonida dalka.
Sanadkii hore ayaa xuska maalintaan taariikhiga ah waxaa loo baajiyay Qatar xagga amaanka ah iyada oo Shabaab ay ku hanjabeen in maalintaasi ay geysan doonaan qaraxyo xooggan.